Inuu sheegay Malaa’ik badbaadisay, waxa uu ugu fadhiyay No. 52, inuu xabsi galay iyo dhacdooyin aan maanka galeynin oo laga diiwaan geliyay Nicklas Bendtner! Qaybta 1-aad. | Horumar Online
Inuu sheegay Malaa’ik badbaadisay, waxa uu ugu fadhiyay No. 52, inuu xabsi galay iyo dhacdooyin aan maanka galeynin oo laga diiwaan geliyay Nicklas Bendtner! Qaybta 1-aad.
Waxaa uu ahaa mid ka mid ah ciyaartoydii noloshooda ay midabbada kala duwan lahayd inta ay ku jireen xirfaddooda kubadda cagta.
Nicklas Bendtner ayaa naftiisa u sheegay sanaddii 2009 inuu shan sano gudahood noqon doono weeraryahan darajo sare leh.
Hase ahaatee, taasi waxa ay noqotay mid aan meel gaarin.
Sanadkii 2014 ayuu soo laba kacleeyay, hase ahaatee, isku daygiisii inuu noqdo ciyaaryahan sare waa ay suuro geli weysey.
Haddaba maxay tahay sababta ciyaaryahankan ugu guuldarreystay inuu noqdo ciyaaryahan horumar ka sameeyo kubadda cagta?
Mar waxaa jirtay in ciyaaryahankan uu tilmaamay dadka inay si caddaalad darro ah ugu tilmaameen mid waallan oo aan fiyoobi qabin, hase ahaatee dhowr jeer oo kale waxaa la arkay isagoo aanan naftiisa caawinin.
Tusaale ahaan, waxaa laacibkan lasoo sawiray isagoo ku sugan Club habeenkii lagu caweeyo, isla markaasna uu surwaalkiisa Jeenis-ka ahaa uu ku mareegsanaa canqowyadiisa ka dib markii Manchester United ay guuldarro kala kulmeen kullan semi-final Champions League ahaa.
Sidoo kale dhacdooyinka la yaabka leh ee la xasuusto waxaa ka mid ah in Bendtner uu tilmaamay inay badbaadiyeen gacan aanan la arkeyn xilli uu shil gaarri galay.
Intaas dhibkiisa kuma eka ee, waxaa xigtay inuu dhibaato ku talo-gal ah ku uu u geystay gurigiisa raaxada, ka dib markii ay kula murmeen qaar ka mid ah saaxiibbadiisa berkadda dabaasha habeenkii ee dhismaha gurigaas ku dhex taallay.
Dhacdadaas toddobaad ka hor, Bendtner waxa uu soo dhammeystay xabsi 50 maalmood ah oo ku muteystay inuu weerarray darawal Taxi, xilli aysan la soconin saaxiibtiisa Philine Roepstorff oo ah gabar Model ah.
Waxaa walba ka daran in laacibkii hore ee Arsenal uu magaciisa ka dhigay “Lord Bendtner “- erayga “Lord”-na waxaa uu la micno yahay Ilaah.